Ivideo: UWillie Madisha ehlekisa ngoNaledi Pandor | News24
Ivideo: UWillie Madisha ehlekisa ngoNaledi Pandor
Cape Town – UNgqongqoshe wezokuVikela eNingizimu Afrika uNosiviwe Maphisa-Nqakula uphakamise ukuba kuvalwe indawo katshwala ePhalamende ngenxa yokuthi amalungu ayahlulema ukuziphatha ngendlela efanele.
Ngokubika kweSowetanlive lokhu ungqongqoshe ukusho ngemuva kokuba ilungu leCOPE ePhalamende uWillie Madisha ehlekise ngendlela uNgqongqoshe wezeSayensi nobuChwepheshe uNaledi Pandor akhuluma ngayo isiNgisi ngoLwesithathu.
“Sihlalo sengikulungele ukudlulisa lesi siphakamiso ngokusemthethweni ePhalamende ukuthi kuvalwe indawo katshwalwa ngokushesha,” esho.
“Ngoba kuyacaca ukuthi ntambama noma ebusuku abantu abaziphathi ngendlela ejwayelekile,” kusho ungqongqoshe.
Zibonele i-video uMadisha ehlekisa ngendlela uNgqongqoshe uPandor akhuluma ngayo.